Loolan cusub oo ka billowday maamulka HirShabeelle iyo wararkii ugu dambeeyey | Warkii.com
Home warkii Loolan cusub oo ka billowday maamulka HirShabeelle iyo wararkii ugu dambeeyey
Waxa maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee caasimada maamulka HirShabeelle ay ka bilaabato diiwaan-gelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka maamulka, xili shalay lasoo saaray jadwalka doorashadaasi.
War kasoo baxay Guddiga ayaa shalay waxa lagu sheegay in maanta oo Isniin ah ay bilaabaneyso qabashada Araajida musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka, halka 3-da Bisha November oo ku aadan Talaalada ay musharixiinta jeedin doonaan khudbadahooda.
Jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka oo u muuqday mid deg-deg ah ayaa waxa lagu soo koobay in saddex maalin gudahooda ay ku dhacdo doorashadaasi, oo loolan adag ugu jiraan dhinacyo badan.
Waxaa jira xubno badan oo isku taagay jagada Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle, kuwaas oo isugu jira kuwa ku cusub saaxada siyaasadda iyo kuwo horay xilal u soo qabtay, waxaana xubnaha musharaxnimadooda ku dhawaaqay kamid ah:
1: Canab Axmed Ciise: Gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaankii 1aad ee Hirshabelle
2: Xildhibaan Siraaji Sheikh Isaaq: oo u sharaxan Gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Hir-shabeelle.
3: Xildhibaan Mahad Xassan Cusmaan: u sharaxan Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka Hir-shabeelle.
Waxa kale oo iyaguna jira shaqsiyaad loolan xoogan ugu jira qabashada xilalkaasi, kuwaasi oo la soo warinayo inay ku kala hirdamayaan mucaaridka iyo dowladda federaalka oo madaxdeedu ay rabto inay markale soo laabtaan.
Arrimahan dhan ayaa imanaya xili maanta amaanka caasimada maamulka HirShabeelle si weyn loo adkeeyay, iyada oo ay ku sugan yihiin siyaasiyiin miisaan culus ku leh dalka, oo isha ku haya hanaanka doorasho ee maamulkaasi.
Previous articleXildhibaanada BF oo maanta ansixiyay sharci muhiim ah
Next articleMadaxweyne Qoor Qoor oo digniin u diray wasiiradiisa
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa magacaabay xubnaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee maamlkiisa, oo ka kooban sideed xubnood. Xubanaha uu magacaabay...
Maamulka Hirshabelle oo dooratay madaxweyne cusub
Mahdi Guuleed oo tusaale dhacay 2016 ugu jawaabay madaxweyne Xasan Sheekh
Cali Xuseen oo ‘lagu dilay’ qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Cawad oo shaaca ka qaaday cidda ka dambeysay xil ka qaadista...
Weerar khasaare gaystay oo caawa ka dhacay Jowhar maalmo kadib doorashadii